CNC Series Fekitori - China CNC Series Vagadziri, Vatengesi
Metal Kucheka CNC EDM Muchina Kugadzikana CNC Spark Sinker EDM Machine CNC50G
Muenzaniso: CNC-50G Tafura Kukura: 850 * 450mm Kukura KweMudziyo Wemafuta: 1370 * 720 * 450mm X / Y / Z Akisi Kufamba: 500 * 400 * 300mm Max.load YeElectrode Musoro: 150kg Max.load YeTafura: 1800kg Net Kurema: 2500kg Dhizaini: 2300 * 2770 * 2650mm Kushanda girazi remagetsi kuburitsa muchina CNC-50G yekugadzirisa furuji 1. Chimiro chemuviri wemuchina nemhando yepamusoro yekukanda resin jecha kushushikana kunoderedza. 2.Kugamuchira chaiyo CAD dhizaini uye yakakwirira chaiyo furemu chimiro. 3. X, Y axles kufamba kwepasi ne "TU ...
Ultra Yakanakisa Pamusoro Kuongorora CNC EDM Muchina 700 * 400mm Tafura Saizi CNC450
Muenzaniso: CNC-40G Tafura Kukura: 700 * 400mm Kukura KweMudziyo Wemafuta: 1130 * 710 * 450mm X / Y / Z Akisi Kufamba: 400 * 300 * 300mm Max.load YeElectrode Musoro: 620kg Max.load YeTafura: 1000kg Net Kurema: 2000kg Dhizaini: 2050 * 2530 * 2400mm Kubudirira girazi remagetsi kuburitsa muchina CNC-40G yekugadzirisa furuji 1. Yakagadzika kune yakasarudzika yakakwira yekudzivirira mafuru uye zvikamu zvekugadzirisa. 2. U-kirasi yepamusoro yepamusoro-soro yepamusoro yekutengesa, kurasikirwa kwakadzika, kupera kwakakwirira. 3. Inoshandiswa kugadzirisa zvikamu zvakakombama zvakapetwa, kunyatso ...
HIgh Yakarurama Industrial Spark Erosion Machine 17000 Kilograms Net Kurema
Muenzaniso: CNC2590N Tafura Yekufamba: 2500 * 900 * 600mm Kukura KweOiri Container: 3800 * 1800 * 650mm Tafura Saizi: 2700 * 1200mm Max. Mutoro weTafura: 10000kgs Net Kurema: 17000kg CNC EDM muchina CNC2590N 1.Iine mabasa seAutomatiki Ekutarisa Chikamu, Infra-tsvuku murazvo uchiona, yakadzika alarm uye kucheka magetsi, kutsvaga iyo yepakati poindi. 2. Gamuchira iyo MOSFET electrocircuit, ine yakakwira kumhanya kugadzira 3. Iva neyakajeka-isina switch switch basa. Anti-kurwisa mabasa anogona zvakare kuwedzerwa kune proce ...
3890 * 4400 * 3580mm Electronica EDM Machine Yakakwira Kucheka Kugadziriswa Kwekumhanya
Muenzaniso: CNC1880N Tafura Yekufamba: 1800 * 800 * 600mm Kukura KweMafuta Container: 3000 * 1500 ** 650mm Tafura Saizi: 2000 * 1000mm Max. Mutoro weTafura: 6500kgs Net Kurema: 13000kg CNC EDM muchina CNC1880N 1.Ive nemabasa akadai seAutomatic Monitoring Level, Infra-tsvuku murazvo kutsvaga, yakadzika alarm uye kucheka magetsi, kutsvaga iyo yepakati poindi. 2. Gamuchira iyo MOSFET electrocircuit, ine kumhanya kumhanyisa kugadzira, uye yakaderera kurasikirwa kweiyo electrode 3. Iva neyakajeka-isina switch switch. Anti-kurwa ...
Otomatiki CNC EDM Machine 4340 * 4900 * 3590mm Iine 8000kgs Max Mutoro weTafura
Muenzaniso: CNC2110N Tafura Yekufamba: 2300 * 900 * 600mm Kukura KweOiri Container: 3500 * 1800 * 650mm Tafura Saizi: 2500 * 1200mm Max. Mutoro weTafura: 8000kgs Net Kurema: 15000kg CNC EDM muchina CNC1880N 1.Ive nemabasa akadai seAutomatic Monitoring Level, Infra-tsvuku murazvo kutsvaga, yakadzika alarm uye kucheka magetsi, kutsvaga iyo yepakati poindi. 2. Gamuchira iyo MOSFET electrocircuit, ine kumhanya kumhanyisa kugadzira, uye yakaderera kurasikirwa kweiyo electrode 3. Iva neyakajeka-isina switch switch. Kurwisa ...
Nhatu akabatana CNC EDM Machine, 2000 * 1300 * 700mm Oil Container EDM Cutting Machine
Muenzaniso: CNC1260N Tafura Yekufamba: 1200 * 600 * 450mm Kukura KweOiri Container: 2000 * 1300 * 700mm Tafura Saizi: 1250 * 800mm Max. Mutoro weEletrode Musoro: 300kgs Net Kurema: 5500kg Matatu Axis CNC EDM Machine, 2000 * 1300 * 700mm Oiri Container EDM Kucheka Muchina 1.Higidity kuomarara, kukwirira kwakaringana, mhando yepamusoro. 2. Kana machining yasvika pakudikanwa kwekudzika, inoenderera ichishandira yakanaka machining maitiro. 3. zvese zvishongedzo zvemagetsi zvine basa rakanaka uye mhando 4.For udzamu hunogara husina kuchinjika, iva ...
2000L Kugona CNC EDM Muchina, Industrial PC Mutungamiriri Wemagetsi Spark Machine
Muenzaniso: CNC850N Tafura Yekufamba: 800 * 500 * 400mm Model Rudzi: CNC EDM Mashini Kukura Kwemafuta Container: 1650 * 1100 * 600mm Tafura Saizi: 1000 * 600mm Max. Mutoro weEletrode Musoro: 200kgs 1000 * 600mm Tafura saizi EDM CNC850N muchina neindasitiri PC inodzora 1.yese modeli machining nzira dzinogona kukodzera akasiyana vatengi zvinodiwa. 2. Kana machining yasvika pakudikanwa kwekudzika, inoenderera ichishandira yakanaka machining maitiro. 3. Otomatiki compute, mesh uye kugadzirisa - Kune kazhinji machining, ...
Otomatiki Spark Erosion CNC Sinker EDM Ine 2300 * 2770 * 2650mm Dimension
Model: CNC540N Tafura Yekufamba: 500 * 400 * 300mm Model Type: CNC EDM Machine Tafura Saizi: 800 * 450mm Max Mutoro weTafura: 1800kgs Max Mutoro weElectrode Musoro: 150kgs otomatiki Spark Erosion CNC Sinker EDM Ine 2300 * 2770 * 2650mm Dimension 1 .Various machine nzira dzinogona kukodzera dzakasiyana mutengi zvinodiwa. 2.Iyo yakanaka kwazvo kuomarara nekutenda kune yakasimbiswa worktable chimiro zvinoenderana nedemo rinofamba rakazvimiririra parutsigiro. 3. Otomatiki compute, mesh uye kugadzirisa - Kwe genera ...
Multifunction ZNC Sinker EDM Muchina 580mm Max Kure KweMold Processing
Muenzaniso: CNC540 Tafura Yekufamba: 500 * 400 * 200mm Model Rudzi: CNC EDM Mashini Kukura Kwemafuta Container: 1300 * 720 * 450mm Tafura Saizi: 800 * 400mm Max. Mutoro weEletrode Musoro: 150kgs Precision Spark Erosion ZNC CNC EDM Die Sinking Machine yeforoma kugadzira CNC 540 1.Various machining nzira dzinogona kukodzera akasiyana vatengi zvinodiwa. 2.Bottom basa rakanaka - Kana machining yasvika pakuda kudzika, ichaenderera ichishandira yakanaka machining maitiro. 3. Otomatiki kuverenga, mesh uye kugadzirisa ...
700 * 400mm Tafura Kukura CNC EDM Machine, Kugadzikana CNC Sinker EDM Machine CNC450
Electrode Musoro: 280mm Model: CNC450 Tafura Yekufamba: 450 * 350 * 200mm Ruvara: Inesarudzo Model Rudzi: CNC EDM Saizi Yemafuta Container: 1100 * 710 * 450 Yakagadzika uye yakavimbika mhando ZNC540 yemagetsi kuburitsa muchina wekuumba kugadzira 1.Stability uye hwakavimbika mhando For Foroma kugadzira. 1.High chinzvimbo accuarcy: inonyanya kukodzera machining zvikamu senge inofa, kuchera kana kufinha. 4.wider huwandu hwekushandisa: kuchera, kufinha, wepakati-mutoro mil ...
High Kugadzikana CNC EDM Machine, 650L Filter Container Cude EDM Spark Machine
Muenzaniso: CNC1680N Tafura Yekufamba: 1600 * 800 * 500mm Kukura KweOiri Container: 2550 * 1500 * 560mm Tafura Saizi: 1700 * 1000mm Max. Mutoro weEletrode Musoro: 400kgs Net Kurema: 9000kg 1000 * 600 * 450mm tafura yekufamba CNC EDM muchina wekugadzira kugadzira CNC 1060N 1.Precision yemukati servo dzimba dhizaini, uchishandisa pcb dhizaini yeakawedzera hupenyu hwebasa, kushanda kwakachengeteka uye nyore kugadzirisa. 2. Gamuchira iyo MOSFET electrocircuit, ine yakakwira kumhanya kugadzira, uye yakaderera kurasikirwa kweiyo electrode 3. Kukakavara-nemishonga PC thi ...